အုပ်ထိန်းရေး ကောင်စီ - ဝီကီပီးဒီးယား
အဂါးကာင္စီ အပါအဝင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအလောင်းတွေ ၏အစ္စလာမ့်သမ္မတနိုင်ငံ၏ ။ ရှိသမျှတို့သည်အစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ လႊတ္ေတာ္ پیشاز နီတာ၊စသည်တို့ကို။ အတည်ပြုအကောင်ဟန်တပါးဥပဒေများနှင့်အသဗ်။ အတည်ပြုကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏အရည်အချင်းအားလုံးအတွက် ရွေးကောက် နိုင်ငံမှလွဲ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ကျေးရွာနှင့်မြို့ကောင်စီ ဘောင်အတွင်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုအကောင်အစား။
17 July 1992 ကတည်းက
အကာင္စီ၏တကျိပ်နှစ်ပါးသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်ခြောက်ခုအဖွဲ့ဝင်နှစ်-သေံသယ်ဆောင်ကြသည်အကြောင်းအမိန့်တော်အားဖြင့်ထို ခေါင်းဆောင်၏အ တိုင်းလိုက်နာနှင့်တပ်ဆင်ကြပြီးအခြားအဖွဲ့ဝင် حقوقدانانی တြနိဒါန်းနှင့်အတူနိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ၊ကို ၊အမဲဒုတိယ၏အ ၏ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ အ၏အတွင်းရေးမှူးဂါးကာင္စီ၊အမြင့်ဆုံးအရာရှိ၏အကာင္စီႏွင့္ယခုအခါ ထိုင္း Jannati ၊အတြင္းထိုအချိန်ကာလ၏။
ကိုက်ညီတဲ့နိယာမ၊အကိုးဆယ်-ဒုတိယ၏အစိုးရအဖွဲ့၏အုပ်ထိန်းသူအကောင်များအတွက်သက်တမ်းခြောက်နှစ်၊တင်မြှောက်၊ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးကာလအတွက်အသုံးနှစ်အကြာမှာ၊ဝက်၏အဖွဲ့ဝင်များ၏မည်သည့်အဖွဲ့အ raffle အပြောင်းအလဲတစ်ခုနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၊မယ့်အစားသူတို့ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။
ကနေအခါဖွဲ့စည်းသောအဖွဲ့ဝင်အတွက်အီရန်အညီဒုတိယအမူ သည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ဥပဒေ ဆုံးဖြတ်ချက်ခဲ့ကြ:
"ခပ်သိမ်းသောအသက်အရွယ်၊အသက်အရွယ်၏ပည္အကြောင်းထက်လျော့နည်းလူငါးဦး၏အမည္ႏွင့္အဓိပၸါယ္ متدینین ကြောင်းအကြောင်းကြားချက်များကိုအချိန်အတွက်အတူတကွဒီအလမ်းအကြောင်းကိုကြေညာ၊စက္စက္၊အစ္စလာမ်ဘာသာ၊မြတ္စလင္၊အဗ္နာ၊ရွီများ၏အမည်များကိုနှစ်ဆယ်ကိုးပညာရှင်များ၏အဘယ်သူသည်ရိုက် مذکوره မိတ်ဆက်ပေးသည်ခံရဖို့လွှတ်ေတာ်၊အမျိုးသားကောင်မြင်ငါးသူတို့ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်ပိုအ၊၏အသက်အရွယ်အဖွဲ့ဝင်အမျိုးသားအစည်းခံခဲ့ရသည်၊သို့မဟုတ်အခိုင်လုံဆြဲထားသူတို့ကိုခြမ်း၊ အဖွဲ့ဝင်၊အသိ၊အရာဝတ္ထုအကြောင်းသာလွှတ်ေတာ်အဖြစ်ဂရုတစိုက်နှင့်ညှိနှိုင်းဆင်ခြင် Rossi ရှိပါတယ်၊အသီးအသီး၎င်း၏ပစ္စည်း معنونه သောဆန့်ကျင်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၏သန့်ရှင်းသောအမွ်အစီအစဉ်ရှိ၊နှင့်ငြင်းပယ်အဖြစ်သူတို့ကိုစေ့စပ်တရားဝင်တွေ့ပါ၏ဘုတ်အဖွဲ့၏ပြည်ပမှာဇ مطاع နှင့် بتبع လိမ့်မည်ဆောင်းပါးသည်အထိအချိန်အ reappearance၏အယ်လ်အသက်အရွယ်အစားအစိုးရ၊အနိစ္စ၊မည်မဟုတ်။"
ရီ၏ပြိုလဲပြီးနောက်ထိုနယ်အတွင်။ ခန့်စကားပြောအရေးအသားများဖွဲ့စည်းပုံအသစ်စတင်။ ကတည်းကစာရေးသူ၏အ မူကြမ်းခခံဥပေဒ၊ယေဘုယျ၏ပညာတတ်လူတိုင်းပြည်အတွက်ပြင်သစ်နှင့်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှု၏အစဉ်အလာဥပဒေအကြောင်းတိုင်းပြည်။ စောင့်ကြည့်ဖို့အခြေပြု၏ဥပဒေများနှင့်အတူဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊စသည်တို့ကို။ အစည်းဆိုင်တူညီသောအကောင်၊ပြင်သစ်ဘုရင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ဒါကြောင့်"အုပ်ထိန်းသူကောင်စီသည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ"ဟုခေါ်သည်။ ဒီခေါင်းစဉ်အတွက်၊ ပရိသတ်၏ကျွမ်းကျင်သူများကအဆိုပါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ အုပ်ထိန်းသူအကာင္စီစတင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်စာသားအချက်အလက်ဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်း هیچکجا ခေါင်းစဉ်အောက်ကိုအုပ်ထိန်းသူများ၏ကောင်စီအစိုးရ၏ပါဝင်ပတ်သက်)။ သို့သော်၊နေဆဲအချို့သောမီဒီယာများ၏အခေါင်းစဉ်၏အုပ်ထိန်းသူ၏ကောင်စီအစိုးရသည်အဖွဲ့အစည်းများပြန်လည်သိမ်းဆည်း။
ပထမဦးဆုံးတာဝန်၏အထိန်းသူကာင္စီ၊ကြီးကြပ်ကျော်ရေးဆွဲရေး၏ဥပေဒမ်ား လႊတ္ေ ။ အကာင္စီအတွက်တာဝန်ရှိသည်တိုင်း ဥပဒေ အတွက်မွေးလွှတ်ေတာ်နှင့်အတူ ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့်စည်းမျဉ်းများအ စလင်ဘာသာဝင်များ ၊အစ္စလာမ်၊ ကိုက်ကိုက်ညီသော၊ ဥပဒေကြမ်း သို့မဟုတ်အစီအစဉ်ကိုလႊတ္ေတာ္၏အတည္ျ။ အပျက်အတွက်အများအားလိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခြင်း၊ဥပဒေကြမ်းသို့မဟုတ်အစီအစဉ်ကိုလွှတ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြန်လာဖို့အေတာ်ကိုပြင်ဆင်လိုချင်သောအားဖြင့်ထိုအုပ်ထိန်းသူကာင္စီပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့။ အပျက်အတွက်အခိုင်အမာ၏ျသတ်မှတ်၏။ အဆိုပါအစီအစဉ်သို့မဟုတ်ဥပဒေကြမ်းကိုအလိုရှိသောအ မြဲ စေလွှတ်သည်။
ဒုတိယအလုပ်တစ်ခုကိုအကာင္စီ၊ကြီးကြပ်ကွပ်အားလုံး ေရြးေကာက္ပြဲ ။ႏို အဂါးကာင္စီကတာဝန်ရှိကြောင်းအရည်အချင်း၊အားလုံးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများပါဝင်သူတိုင်းအ ရြးေကာက္ပြဲ မှလွဲေရြးေကာက္ပြဲ အစြန္းကောင်၏မြို့ရွာ အတွက် အပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတော့ခွင့်ပြုဖို့အတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက် အရြးေကာက္ပြဲ ကို လောင်း ။
တဦး၏အခြေခံအခြေအနေအတွက်ထိုစနစ်များ၊လူ၊Salar ၏နိယာမခြာအဏာ ။ ညီဒီနိယာမ၊အစိုးရအကိုင်းအခက်၊လွတ်လပ်သောခင်းနှင့်အချင်းချင်းကွဲပြားသောအတိုင်းအတာများ၏တာဝန်နှင့်အခွင့်အာဏာဆုံးဖြတ်ပြီးလွတ်လပ်သောအချိန်။ အမျိုးမျိုးသောအခက်အစိုးရများ၊များသောအားဖြင့် အမှုဆောင်ဘဏ္ခြဲ။။။ အလွဴမ်ား ၊ တရား ကြသည်။ ပေမယ့်အများ၏ပွဲတော်၏နိယာမခြာအဏာအလုပ်ငန်းစဉ်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချင့်တိုင်းပြည်အတွက်အနှေး၊ဒါပေမယ့်ပြန်လာအတွက်ဖြစ်ရတဲ့အငိမ္ျ၏ပိုင်ဆိုင်မှု၏အကာကွယ်တားဆီးစြန္းသည်။
စိတ်အပိုင်းအတွက်၊ အဆိုပါလွှတ်တော်၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ၊စသည်တို့ကို။ အကိုက်ညီတဲ့နိယာမ ۹۴၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကာင္စီ၊စသည်တို့ကို။ အစွန့်ပစ်၏ခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ခံရ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလွှတ်ေတာ်ရှိသည်။ အပေါင်းအကိုက်ညီတဲ့နိယာမ ۹۳၊ဥပဒေ၊ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊လွှတ်ေတာ်မပါဘဲတည်ရှိ၏အုပ်ထိန်းသူကာင္စီ၊ဥပဒေရေးရာမည်မဟုတ်။
စိတ်အပိုင်းအတွက်၊ အလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုတရား။၊ အကိုက်ညီတဲ့နိယာမ ۹۸၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကောင်စီ၊လုပ်ငန်းတာဝန်များ အလေ၏ လေ့ကျင့်ခန်း။ သောကြောင့်ဤအဆိုအမူ၊လုပ်ငန်းတာဝန်များအနက်အစိုးရမှအကောင်အမန္အားျ။
စိတ်အပိုင်းအတွက်၊ အလုပ်ပိုင်ခွင့်ရြးေကာက္ပြဲ အညီနှင့်အတူဆောင်းပါး ۹۹ ခခံဥပေဒလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း-နိုင်ငံရေး၊အုပ်ထိန်းသူကာင္စီ၊ေရြးေကာက္ပြဲစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ပရိသတ်အ၏။၊ ထိုသူႏွစ္ဦး၏မၼတ၊လႊတ္ေကာင္စီကိုရည်ညွှန်းသောမဲ၊ဆန္ဒခံယူပွဲများ၊တာဝန်ရှိသည်။ ဒါဟာစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးများအမျိုးအစားကို အပြည့်အဝဇာတ်လမ်း ။
ထိုင္း Jannati (သန္း)
စုံစမ်းစစ်ဆေး شبزندهدار Jahromi
သိပါဘာ့ Hashemi Shahroudi
ထိုကာလများ၏လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ဝင်များ၏အုပ်ထိန်းသူကာင္စီ၊ခြောက်နှစ်နဲ့အများအားဖြင့် ۲۶ ဇူလိုင်လ၏အဌမတနှစ်၏အဆုံးမှ။
အပြည့်အဝဇာတ်လမ်း အပါအဝင်၊လုပ်ငန်းများ၏အုပ်ထိန်းသူကာင္စီကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေမှာ၊အမြဲတမ်း منتقدانی အများအပြားကြမ်းတမ်း၏၊အင္ငံေရး၊အစ္စလာမ့်သမ္မတနိုင်ငံ၏အထိန်းသူကာင္စီဝ။
↑ Iran's Conservatives: The Headstrong New Bloc။ Frontline။ PBS (12 September 2011)။
↑ دیوان عدالت اداری :: قانون اساسی (in ar)။ 21 January 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9December 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ناصر کاتوزیان؛ قانون‌نویسی که دموکراسی می‌خواست (in fa)။6October 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9December 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (in fa) (1978-01-07)။
အဂါးကာင္စီ Archived 10 August 2019 at the Wayback Machine.
အစိုးရ၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း-နိုင်ငံရေး Archived 10 December 2006 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အုပ်ထိန်းရေး_ကောင်စီ&oldid=698964" မှ ရယူရန်
၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။